ကောင်းမွန်ဝင်း: Lifetime Respect
လူတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ရဲ.မိသားစု၊ ချစ်သူရည်းစား နဲ. တသက်လုံးအမြဲအတူနေချင်ကြတာ ဓမ္မတာပါ၊။ အခုလို နေ.စဉ်လူ.လောကကြီးထဲမှာကျင်လည်နေနိုင်တာလည်း ကိုယ့်ရဲ. မိသားစု၊ ချစ်သူရည်းစားတွေ က အနားမှာရှိနေလိုပေါ့တဲ.။ ဒါ.ကြောင့် တစ်သက်လုံးအမြဲအတူနေပေးပါဆိုတာကို ပြောထားတဲ. ဂျပန်သီချင်းနှစ်ပုဒ်(အမျိုးသားရဲ.ဖွင့်ဟချက်နဲ.အမျိုးသမီးရဲ. ဖြေကြားချက်) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းရဲ. ထူးခြားမှုက ဆိုလိုရင်းကို အလွယ်ကူဆုံးစကားလုံးတွေနဲ. တည့်တိုးပြောထားတာပါပဲ။ဂျပန်ဘာသာလေ.လာလိုက်စား နားလည်တဲ.သူတွေအတွက် နားလည်လွယ်ပြီး ဆိုလို.ကောင်းမယ့် သီချင်းတွေလို.ထင်ပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ပါ။　သီချင်းစာသားကိုလည်း ဂျပန်လိုအတိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သီဆိုသူတွေကတော့ အမျိုးသမီးဘက်မှဖြေကြားချက်ကို RSP 「REAL STREET PROJECT」အဖွဲ.သားများက ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ သီဆိုပြီး၊ အမျိုးသားရဲ.ဖွင့်ဟချက်ကိုတော့ မစ်ကီ၊ ဒိုးစံ (MIKI Dosan) က၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ သီဆိုခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းခေါင်းစဉ်က 『Lifetime Respect 』ပါ။ ဆယ်စုနှစ်ချီပြီး လူတွေရဲ့ နှလုံးသားကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ. သီချင်းထဲက စာသားလေးကတော့ “ တသက်လုံး အတူနေပေးရမယ်နော်”တဲ့။
Lifetime Respect ( အမျိုးသမီးရဲ. ဖြေကြားချက်)
(hear whe mi say)
Ｒespect for all lifetime
Lifetime Respect ( အမျိုးသားရဲ. ဖွင့်ဟချက်)
お前だけは手放しちゃいけない と思えた 今は湧いてくる愛おしさに溺れたい
結婚なんて ほんまに分からん けど欲しいお前との赤ちゃんBaby
こんな気分が運命って気がすんねん 大事にすんで だから
お前がもしも ボケた時も 俺が最後まで介護するで心配ないぞ
一緒に料理したり 映画見たり 愛のあるSEXに精ぇだしたり
何があるかこの先わからへん けどお前を絶対 離さへん マジで
仕事も遊びも つらい時もまた楽な時も 一緒に泣いて笑いたい
Lifetime Respect (အမျိုးသမီး version)
Lifetime Respect (အမျိုးသား version)
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 20, 2009